Jinan Lide ngerabha & Plastic Co.Ltd.
maleko wokwakha ngokomaleko
Ukuqiniswa kwecingo, i-curl yomphetho
Uvavanyo loxinzelelo lwe-hydrostatic 1.5 ixesha
nkqo iziko machining
ukuguquguquka kwamalungu okwandiswa kwerabha kunye nemibutho yabasebenzi
Uvavanyo lokuhamba kunye nokuhamba kwe-axial
Ukwandiswa kweArab yerabha eyongezelelweyo
Ukwandiswa kweArab yerabha yokuHlanganisa
Ulwandiso lweWebhu ebanzi
Uhlobo lweSpool loLwandiso lweRabha oluHlanganisiweyo
Irabha Pipe Connector
I-ELASTOMER IPROPHIKI NEMPAHLA YOKUPHATHISWA KWEENKONZO
Ukufakwa kunye neMiyalelo yokuHlola
Ukufunyanwa kwe-France kuye kwafunyanwa ngo-Sep. 29,2021
Nasi isiqinisekiso sethu se-ACS, esenzelwe iFrance ukusela amanzi ngerabha. Kwaye senze olu vavanyo ukusukela nge-Agasti 20, 2020. Kwaye sisifumene isatifikethi nge-Sep, 29,2021.
Okthobha 13-14 Umthengi ongumFrentshi utyelele imemo
Siyavuya kakhulu inkampani yabo yokuthenga abantu beza kumzi-mveliso wethu ngo-Okthobha 13-14, kwaye banemvume entle kwinkampani yethu. Olu lutyelelo lwabo lwesibini. Inkampani yethu ngumzi mveliso wamalungu erabha, sinobubanzi obuphindiweyo kunye namalungu erabha angaphandle. Kwaye izinto zerabha zezi NB ...
Iipropathi zeRubber kunye noLawulo loMbala
Irabha ibandakanya amaqela amabini: irabha yendalo kunye nerabha eyenziweyo. Irabha yendalo yenziwe ngeglu evela kwimithi yerabha kunye nengca yerabha, kwaye irabha eyenziweyo ifunyanwa zii-monomers ezahlukeneyo. Iimveliso zerabha zisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iinkalo zeshishini okanye zobomi. Imithi yerabha yoqobo ikhule eMzantsi Melika ...
Siphuhlise itekhnoloji entsha yokudityaniswa kwerabha edibeneyo - irabha edibeneyo ngaphandle kwemingxunya yokungena
Ingxaki yokuphuma kwenkqubo yokuveliswa kwendibaniselwano yerabha ibisoloko iyeyona nto iphambili kwinkqubo yokuqunjelwa. Kwangelo xesha, imingxunya yokungena kwemveliso kwiimveliso ezigqityiweyo zichaphazela ukubonakala kweemveliso, kwaye abasebenzi kufuneka basike iives ngesandla ...
"Ukuvavanywa kwe-conformité sanitaire" (ACS) Imvume yaseFrance iqale ngo-Agasti, 2020.
Isiqinisekiso se- "Attestation de conformité sanitaire" (ACS) sisiqinisekiso samanzi okusela saseFrance esibonisa ukufaneleka kweemveliso eziza kuthi zidibane namanzi enzelwe ukusetyenziswa ngabantu. Ngo-Agasti ka-2020, ngokusekwe kwimfuno yomthengi, silungiselele ...
NgoJuni, amalungu ethu erabha e-EPDM aziphumelele iimvavanyo zeSingapore SETSCO.
Indlela yovavanyo: SS 375- Ukulungela kweemveliso ezingezizo ezentsimbi ukuze zisetyenziswe ekudibaneni namanzi enzelwe ukutyiwa ngabantu ngokubhekisele kwiziphumo zawo kumgangatho wamanzi. 1) Icandelo 1: Ukucaciswa 2) Icandelo 2: Iisampulu zovavanyo 3) Icandelo 2: 2: 1: Od ...
NgoJulayi.2,2019, sifumene isatifikethi se-CE.
NgoJulayi.2,2019, sifumene isatifikethi se-CE. Iimpahla ezifanelekileyo kukwanda okuguqukayo okwenziwe ngokudibeneyo irabha edibeneyo, izinto ze-EPDM phantsi kwenkcazo ye-EN681-1 1996. Ingxelo yeNombolo: HST-JNLR2119062045 Ulwakhiwo oluneenkcukacha zezi zilandelayo:
Nge-14 kaJuni ka-2019, sizifumene izatifikethi ze-Wras.
Amanzi okusela abaluleke kakhulu kwimpilo yabantu. Ungcoliseko lwamanzi yeyona nto iphambili emzimbeni wam. Ukuphucula umgangatho wamanzi alungele ukuselwa kubalulekile kwaye kubaluleke kakhulu. Ngokwesiqhelo, amanyathelo okuphucula amanzi okusela ngala alandelayo: Ukhuseleko ...
Sithumelele i-imeyile, sitsalele umnxeba okanye ugcwalise apha ngezantsi iphepha lokuphanda. Siza kubuyela kuwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24.